Leçon 17 (Lesson 17 ) – Speaking French – Maung Paris | MoeMaKa Burmese News & Media
Leçon 17 (Lesson 17 )
Passé Composé ( Simple Past Tense ) အတိတ်ကာလပြပုဒ် နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ။
စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်း သင်ခန်းစာ ( ၄ )
ပါရီမောင်၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၃
ပြင်သစ်ဘာသာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သာမန်အားဖြင့် ပြောဆိုရာမှာ အသုံးပြုရတဲ့ Passé Composé ကတော့ အကူကြိယာတွေဖြစ်တဲ့ Avoir နဲ့ Etre တို့ ထောက်ပံ့မှု မဖြစ်မနေ ပါမှ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအနေနဲ့ကတော့ မူရင်းကြိယာတလုံးထဲကိုပဲ သုံးပြီး သူ့ရဲ့ Past Participle ကို သုံးရုံပါပဲ ။
Passé Composé ကို ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Avoir နဲ့ Etre တို့ရဲ့ Conjugaison ကိုပိုင်နေရပါမယ်။
အဲဒီအတွက် အရင်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပေးပါမယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း (၄) Avoir နဲ့ Etre တို့နှင့်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ
( ဒီတခါမှာတော့ ဘယ်ကြိယာကို ရွေး ရမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရပါမယ်)
၁။ Philippe – – – une voiture . Philippe မှာ ကားတစီးရှိတယ်။
၂။ Vous – – – gentil . ခင်ဗျားဟာ ကြင်နာမှုရှိတယ်။
၃။ Il – – – son travail. သူ့မှာ သူ့အလုပ်ရှိတယ်။
၄။ Nous – – – en retard. ကျနော်တို့တွေ နောက်ကျကြတယ်။
၅။ C’ – – – pas facile . အဲဒါက သိပ်မလွယ်ဘူး။
၆။ C’ – – – facile à dire. ပြောဖို့ကတော့လွယ်တာပေါ့။
၇။ J’ – – – faim. ကျမ ဗိုက်ဆာတယ်။
၈။ Nous – – – soif. ကျနော်တို့ ရေဆာတယ်။
၉။ – – – – tu un papier? မင်းမှာ စာရွက်တရွက်ရှိလား။
၁၀။ J’ – – – une idée. ငါ့မှာ အကြံတခုရတယ်။( ရှိတယ်)
၁၁။ Ils – – – des chanteurs. သူတို့တွေဟာ အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတယ်။
၁၂။ Aujourd’hui , c’ – – – mon anniversaire. ဒီနေ့ ငါ့မွေးနေ့လေ။
၁၃။ La fête Thidingyut – – – joyeuse. သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကတော့ အရမ်း ပျော်စရာကောင်းတယ်။
၁၄။ Chacun – – – ses souvenirs. လူတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ အမှတ်ရစရာတွေရှိတယ်။
၁၅။ Mg Hla – – – connu pour sa gentillesse. မောင်လှဟာ သူ့ရဲ့ ကြင်နာမှုကြောင့် လူသိများတယ်။ ( အမကိန်းဆိုရင် connue ဖြစ်ရပါမယ် )
ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကပြောခဲ့ သလိုပဲ Passé Composé ရိုးရိုး အတိတ်ကာလပြောဆိုဖို့ကို Avoir နဲ့ Etre တို့နဲ့ မဖြစ်မနေ တွဲသုံးရပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ ကြိယာတွေကို Avoir နဲ့ သုံးပြီး ပြောင်းရမယ် ၊ လှုပ်ရှားမှု ရှိတဲ့ ကြိယာတွေကို Etre နဲ့ သုံးပြီး Passé Composé ကို ပြောင်းပေး ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံတုံး တခါထဲ ပြောထားချင်ပါတယ် ။ လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ ကြိယာတွေအပြင် Verbe Pronominal ( မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်သော ကြိယာ ) တွေကိုပါ နဲ့သုံးပြီး Passé Composé ကို ပြောင်းတဲ့ အခါ Etre နဲ့ပဲ သုံးရပါတယ်။
ဒီတော့ လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ ကြိယာတွေဆိုတာ ဘာတွေလဲလို့ မေး စရာဖြစ်လာပါပြီ။
အောက်ပါ ကြိယာတွေက အသုံးများပြီး သိထားသင့်ပါတယ်။ သိပ်မများလှပါဘူး။
aller – အားလေး ။ သွားသည်။
venir – ဗနီးခ် ။ လာသည်။
sortir – ဆော့ခ် တီး ။ ထွက်သည်။
entrer – အောန်ထရေး ။ ဝင်သည် ။
rentrer – ရောင့်ထရေး ။ ပြန်လာသည်။
courir – ကူးရီးခ် ။ ပြေးသည်။
partir – ပါ့ခ် တီး ။ ထွက်ခွါသည်။
monter – မော့်န်တေး ။ တက်သည် ။( အမြင့် သို့ )
descendre – ဒေး စောန်း ဒ် ။ ဆင်းသည်။
( ချိန်ညှိခြင်းတွေ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမှာကို မမေ့ပါနှင့် )
ဥပမာ – ကျနော် ကျောင်းမှ ပြန်လာသည် ။ ဆိုတာကို ပြောဖို့ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
” ကျနော်၊ ကျမ ” ဆိုတာက Je
” ပြန်လာသည် ” ၊ ဆိုတဲ့ ကြိယာက rentrer
” ကျောင်း ” ကတော့ école ၊ ဒါပေမဲ့ နာမ်တိုင်းမှာ မပါမဖြစ် article နဲ့တွဲလိုက်တော့ l’école
ဝိဘတ် ဖြစ်တဲ့ préposition ဖြစ်တဲ့ de ကတော့ ” မှ “
Je suis rentré de l’école. ရဆွီ ရောင့်ထရေး ဒ လေးကော။ ကျနော် ကျောင်းမှ ပြန်လာသည် ။
ပြောတဲ့သူက မိန်းကလေး ဆိုရင်တော့ Je suis rentrée de l’école.
Nous sommes venus de Paris. နူစွမ်း ဗနယူး ဒ ပါရီ ။ ကျနော်တို့ ပါရီမှ လာကြသည်။
Elle est partie avec Paul. အယ်လ် လေ ပါ့တီး အာဗက်ပေါလ်။ သူမ ပေါလ် နှင့်ထွက်သွားတယ်။
Vous êtes allé au magasin avec qui ? ဗူဇက်ထ် အားလေး အို မာ့ဂါဇာမ် အာဗက် ကီး။ ဆိုင်ကို မင်းဘယ်သူနဲ့ သွားခဲ့သလဲ ။
ဒီနေရာမှာ ” မင်းတို့ ” လို့ ကိုယ်ပြောနေတဲ့သူက ၂ ယောက်ထက် အများဖြစ်နေရင်တော့ Vous êtes allés လို့သုံးရပါတော့မယ်။
ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ အခုပြောလိုက်တဲ့ မင်းတို့ ဆိုတာတွေထဲမှာ မိန်းကလေး ၁၀ယောက် နဲ့ ယောက်ျားလေး တယောက်ပဲ ဖြစ်နေဦးတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ သုံးရပါဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ယောက် သို့မဟုတ် ၂ယောက်နဲ့ အထက် အားလုံးဟာ မိန်းကလေးတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့
Vous êtes allées ဗူဇက် ဇာလေး လို့ရေးရ၊ ပြောရပါတော့မယ်။ အသံကတော့ဘာမှ ကွာခြားချက်မရှိလို့ သဒ္ဒါကိုမသိရင်၊ မကျွမ်းကျင်ရင် ရေးလို့ မရပါဘူး။ ပြောနေတာမှာတော့ မသိသာဘူးလေ။
( ပါရီမောင် ပြောဖူးတယ်မဟုတ်လား ၊ ကျောင်းမှာ ၂နှစ်လောက် လုံးလည်လိုက်နေတာလေ)
အထက်ပါ နမူနာအချို့ဟာ Passé Composé အသုံးအနေနဲ့ အပြော၊အရေး ၂ခုလုံး ဒီတိုင်းပဲ သုံးကြပါတယ်။
Je suis fatigué. ရဆွီ ဖတ်တီဂေး ။ ကျနော် ပင်ပန်းတယ်။
Elle est connue. သူမသည် လူသိများတယ်။ ထင်ရှားတယ်( မိန်းကလေးဖြစ်လို့eထည့်ရတယ်)
ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုးံတွေကတော့ ရိုးရိုး နာမဝိသေသန Adjectif ကို Etre နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်လို့ Passé Composé နဲ့ မမှားဖို့လိုပါတယ်။ fatigué နဲ့ connue တို့ဟာ Adjectif နာမဝိသေသန ဆိုတာကို သိနေရပါမယ်။
အလားတူ မှားနိုင်သေးတာ နောက်တခုကတော့ Passif ပဲဖြစ်တယ်။ ပြုလုပ်ခံရသူ အနေနဲ့ သုံးပါတယ်။ ကြုံသလို ဖေါ်ပြပေးသွားပါမယ်။
ကျနော့် ငါးတွေလတ်တယ်နော် ၊လတ်တယ်။
ပြီးတော့ ခရုလဲ ဒီညနေအတွက် တစ်ကီလို ယူမယ်။ အဲဒါကို ခရင်မ် နဲ့ချက်ရမယ်။
ကောင်းဒါပေါ့ ၊ ပုဇွန် တချို့ ယူဖို့လဲ အကြံပေးချင်တယ် ၊ အဲဒါတွေက လျှော့ဈေးနဲ့လေ။
ကောင်းပြီ ၊ အဲဒါကို ၆၀၀ ဂရမ် ထည့်ပါ၊
မင်း တွေ့လိမ့်မယ်( သိလိမ့်မယ်) ၊ စားကောင်းလိမ့်ဦးမယ်၊
ကောင်းတယ်မေ ၊ ကျနော် ပုဇွန် သိတ်ကြိုက်တယ် ။ အထူးသဖြင့် အဲဒါတွေကို လက်နဲ့ စားရတဲ့အခါတွေ ဆိုရင်ပေါ့။ ( လီလူးကပြောတယ်)
ဒီတပါတ်မှာတော့ အသံတွေကိုနားထောင်ထားပြီး ယခင်ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ်ပြောချင်တာတွေကို စာနဲ့ရေးချ၊ လက်တွေ့ ပြောကြည့်ပါ ။ နောက်တပါတ်မှာ ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ သဒ္ဒါ အသုံးတွေကို ရှင်းလင်းသွားပါမယ်။